ပန်ဒိုရာ: စိတ်မပါလက်မပါ ညနေခင်းတွေ
စိတ်ပါလက်ပါ ညနေခင်းများ ရောက်ရှိပါစေခင်ဗျားးးး
၁ နဲ့ ၁ ပေါင်းတဲ့အခါ ၂ မရဘူးလို့ သင်ကြားရတဲ့အချိန်မှာ သင်္ချာပညာကို စိတ်ကုန်သွားခဲ့ဖူးတယ်... အတတ်ပညာတခုမှာ ဘာလို့ အဲလိုမျိုး မာယာတွေ များနေတာလဲ- လို့တွေးခဲ့ဖူးတယ်... ဒါတောင် သိပ္ပံဘာသာ တခုနော်... ခုတော့ လောကကြီးကို စိတ်မပါ လက်မပါ... ဘာတခုမှ မပါပဲနဲ့ ပွေ့ဖက်နေခဲ့ရတာ ဆိုတော့... ညနေခင်းတွေနဲ့ပါ ထပ်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ .... ... ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွှေရောင်တောက်ပသော ညနေခင်းများကို မပန် စိတ်ပါလက်ပါ ပွေ့ဖက်ခွင့်ရပါစေ...
ခုလဲ စိတ်ပါလက်ပါ လာဖတ်ပါတယ်။
ပျောက်နေတာ ကြာတဲ့ မ ဆီက လှလှပပထွက်လာတဲ့ ကဗျာလေးကို စိတ်ပါဝင်စားအားပေးသွားပါတယ်။
ကောက်ကိုင်လိုက်မှ ဖြတ်ခနဲ အက်ကွဲသွားလေတယ် တဲ့
Name less bird said...
I really like it...Thank you Ma Pan..
Takecare your helth too.
ကိုယ့်မှာလဲ အဲဒီလို စိတ်မပါ လက်မပါ ညနေခင်းတွေ ရှိနေတယ်...။ စိတ်မပါလို့ ဒီအတိုင်း ပစ်ထားလို့မရ... တာဝန်အရ မဖြစ်မနေ လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ညနေခင်းတွေရောပဲ...
အဲ... ကောက်တော့မကိုင်ရဲဘူး... ကွဲသွားမှာ စိုးလို့...။
သစ္စာနဲ့မေတ္တာဟာလည်း ရွှေမန်းသဘင်နဲ့ မော်တော်ဘုတ်လောက်သာ ရှိတတ်ခဲ့ပြီလေ..
ဒီတော့ ညနေခင်းဟာလည်း ကွဲအက်ကြေမွခြင်းမှာ တကယ့်ကို....တကယ့်ကိုပါဘဲ စိတ်မပါလက်မပါပေါ့..
အက်ကွဲသွားတဲ့ ညနေခင်းကို စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ ပဲ ထိုင်ကြည့်နေမိတော့တယ် ။
မရေ... စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကို ခံစားသွားပါတယ်။